Ellicott Brand Cutterhead Gargaarka Gargaarka ee Mashaariicda - Ellicott Dredges
Ellicott® Brand Cutterhead wuxuu u yaboohay Gargaarka Mashaariicda Macdanta laga fuliyo Mareykanka oo dhan, Yurub iyo Aasiya
Ellicott® Noocyo ay ka mid yihiin qodista tuubbooyinka biyo-xidheenka biyuhu ay ku sii kordhayaan qodista macdanta iyo isku-darka hawlgallada min dhuxusha illaa daanta illaa isugeynta.
Soo kabashada Dhuxusha
Goobaha gaasaska ee bariga Pennsylvania, ganaaxyada dhuxusha mar loo tixgaliyo inay wax u dhimman yihiin badbaadinta waxaa dib u helay Ellicott® nooca nuugida jeex jeex jeexan. Hawlaha awgood, ilaa gawaarida tareenka ee 30, maalin dhuxul ayaa dib loo soo celiyay, taasoo awood u siineysa awood koronto si ay diyaar ugu noqoto shidaal qiimo jaban loogu talagalay matooryaasheeda. Qulqulka ayaa ka soo jaray wax ka badan cagaha dhererkiisu yahay 185 halkaasoo lagu qiyaasey in 1,200,000 tan oo qashinka dhuxusha ah lagu keydiyey. Dhinacyada ciriiriga u ah murugada, qoto dheerkooda, iyo dabeecada aan caadiga aheyn ee dhulka ayaa dib u soo kabashada ganaaxyada waxay noqon karaan kuwo adag oo waqti qaata. Qalabka waxaa lagu daadiyay tuubbada, waxaa loo gudbiyay nidaam dib u habeyn ah oo matoorrada dhererka guud ee cagaha 2000, ka dibna lagu keydiyey dejinta weelka.
Biyo ayaa loo daadgureeyay wabiga u dhow, halka cunnooyinka haray, oo ay ku jiraan ganaaxyada dhuxusha, ayaa la gaarsiiyay aalado kala duwan ilaa munaarad kama dambeys ah oo kama dambeys ah. Ugu dambeyntiina, cunnooyinka adkaha ah ayaa lagu tuuray tuubooyin keyd ah oo loogu talagay tamarta korantada.
Soo saarista Macdanta
Faransiiska gudaheeda, qoditaanka Haydarooliga waxay u rogtay hawlgal soo saarista macdanta geesinimada leh mid aad u guuleysan iyadoo lagu xallinayo dhibaatooyinka soo saarista ee hawlgalka macdanta daasadda alluvial. Daadku wuxuu caddeeyay habka ugu habboon ee qodidda iyo rarka alaabada masaafo aad u fara badan oo loo geeynayo dhirta ka faa'iideysiga xeebta. Warshadda wax lagu farsameeyo ayaa dib loo qaabeeyey iyadoo lala xiriirinayo awoodda qodidda iyo qalab dheeri ah oo lagu rakibay si ay ula tacaalaan qulqulka maaddada. Dhismaha oo dhan waxaa loogu talagalay in lagu maareeyo 150 mitir cubic mitir saacaddii oo dhan oo ah kaydinta alluvial. Markay masaafada dredge ee warshadu dhaaftay xadka la taaban karo, injineerada hawlgalka waxay go'aamiyeen in geedka uu raaci doono qoditaanka.
Qulqulka jeex jeex jeexan ayaa beddelay xariiqda jiidda ee alumina dhoobada howlo qashin qubka loogu talagalay warshad sibidh oo ku taal Winnipeg, Canada. Mas'uuliyiintu waxay soo sheegaan boqolkiiba 90 ah oo ah 15 illaa 20 kordhida wax soo saarka dhoobada dhoobada iyada oo loo marayo dhalada dhaqida taas oo ka dhalatay qanjirada yar-yar ee dhoobada dhoobada leh ee la geeyay godka daadashada. Tan iyo markii jaranjarada dillaacday iyo matoorka loo diiday wax ka weyn 5 ama 6 inji oo dhexroor ah, waqtiga luminta sababtoo ah dayactirka qolka maydhashada ayaa la yareeyay.
Magaalada Parkersburg, West Virginia, shirkad ciid iyo dhagxaan ah ayaa balaarisay tashiilaadkeeda wax soo saarka si ay ula kulanto baahida kordhaysa iyadoo la adeegsanayo Ellicott® astaan ​​dredge. Hull waxaa loogu talagalay in lagu qaado geedka oo dhan. Dhererka waxaa kuxiran sedex weel oo xamuul qaada iyo hal sandal ciid ah oo u oggolaaneysa saddex cabbir oo dhagax ah iyo hal cabbir ciid ah isku mar. Ka-faa'iideystaha iyo dhirta baaritaanka ayaa lagu rakibay godka.
Qulqulka goynta jeex jeexjeexyada ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu kordhiyo waxqabadka iyo waxsoosaarka ciidda masarida. Qulqulaya ayaa soo tuurtay 120 illaa 125 tan saacaddii oo ah walxaha ceeriin si toos ah warshadda. Qulqulaha wuxuu leeyahay tallaabo nadiifin ah maadaama ay ciidda masasida ku ridayaan warshadda. Kahor ku darista qulqulka, hawlgalku wuxuu u baahday laba gawaarida xNUMX-taayirrada mararka qaarkoodna laba baararka.
Magaalada Calvert City, Kentucky, waxaa loo adeegsaday soosaarida acetylene. Lime diirrida loo isticmaalay ayaa loo isticmaalay inuu sameeyo gaaska acetylene. Liin la goglay ayaa laga soo saaray warshadda oo loo dhigay balliyada. Dillaaca jeex jeexintu waxay ka soo saartey warshadii la gooyey ee balliga ka dibna ku tuurtay 1,200 cagood warshad caloosha ka soo kabaneysa. Lime briquettes ayaa lagu daray coke si loo sameeyo kaalshiyam kaalshiyam ah.
Ohio gudaheeda, geed kale oo la mid ah ayaa u shaqeynayay sidii matoor loo soo tuuro si uu u gaarsiiyo kaalshiyamka kaarboon-ka-kariska ah warshad dib-u-cusboonaysiin ah si loogu beddelo liin deg-deg ah oo loo isticmaalo hanaan biyo jilcinta degmada. Qulqulka qashin-qubka wuxuu oggol yahay ku-shaqeynta kilniska mid isku mid ah oo si hufan waxsoosaarka waxsoosaarka u soo baxa, taasoo markaas yareynaysa qiimaha.
Mararka qaarkooda, kaydinta hawo-haweedka waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo kharashyada aan tooska ahayn ee macdanta. Guyana, qulqulka ayaa loo isticmaali jiray in lagu mideeyo marinnada biyuhu maraan si loogu oggolaado dhaqso dhaqso badan ee xamuul qaada xamuulka birta, yareynta kharashyada kaydka.
Ellicott® noocyada kala duwan ee calaamadaha ayaa loo adeegsadaa codsiyada noocan oo kale ah, adkee baahida loo qabo hoos u dhuuqida cutterhead inay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo sahlan in la ilaaliyo, maxaa yeelay waa kan ugu horreeya iyo kan keliya, mashiinka wax soo saar leh ee wadarta silsiladda mashiinnada dhirta.
Way fiican tahay injineernimada dhirta si loo hubiyo in qulqulatada kaligeed ay awood u leedahay in ay ilaaliso heer wax soo saar ka sarreeya marka loo eego warshadda wax soo saarta, si loo helo xoog kayd ah oo loo isticmaali karo wakhti ka waqti marka la joogo habka kaydsashada, sida geedka kana soo horjeedda wax soosaarka celcelis ahaan ka hooseeya.
Soosaarka qulqulaha waxaa lagu soo rogi karaa kala duwanaansho sababta oo ah qoto dheer oo qodis ah, culeys gaar ah, iyo isku xirnaanta sheyga, iyo tuubbada masaafada u dhaxaysa godka amaahda iyo kaydinta ama warshadda wax soosaarka. Isugeynta kala duwanaanta wax soo saarka waxay u dhexayn kartaa inta u dhaxaysa boqolkiiba 0 iyo 200 boqolkiiba haddii soo-saarka celcelis ahaan lagu soo rogay boqolkiiba 100. Maaddaama dhir aad u yar oo warshadeyn ah loogu talagalin karo xaddiga xad dhaafka ah ee 100, waxay noqoneysaa tixgelin muhiim ah xagga naqshadeynta iyo dhismaha si loo xaddido kala duwanaanshaha la oggol yahay ee wax soo saarka meel ilaa inta u dhaxaysa boqolkiiba 50 iyo 150.
Qayb ciriiri ah oo kala duwanaansho wax soo saar saacadeed way adag tahay in lagu gaaro xaaladaha caadiga ah. Xitaa gudaha kooxdan, waxaa lagama maarmaan ah in qulqulayaashu ay noqdaan kuwo lagu kalsoonaan karo si ay ugu shaqeeyaan 24-saac maalin kasta iyada oo loo eegayo jadwalka toddobaadlaha iyo bil kasta dayactirka.